मन्त्री चढेको गाडी ठेल्नेको लाइन
२०७६ भदौ २३ सोमबार, सुर्खेत । पातारासी गाउँपालिका– २ तल्फी गाउँ जुम्लामा निर्मित ‘छन्चरी हाल्ना जडिबुटी प्रशोधन उद्योग’को उद्घाटन कार्यक्रममा जाँदै गर्दा हिलाम्य सडकममा फसेको कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा सवार गाडी धकेल्दै स्थानीयवासी । ... बाँकी अंश»
बाढीबाट कटान सडक निर्माण
२०७६ भदौ २३ सोमबार, बनेपा । साउन २५ गतेको अविरल बर्षाका कारण अरनिको राजमार्गअन्तर्गत पाँचखाल नगरपालिका–९ स्थित चाखोलामा आएको बाढीले कटान गरेको सडक निर्माण गर्दै कामदार । ... बाँकी अंश»
वडाध्यक्ष र प्रहरी अधिकृत सम्मानित
२०७६ भदौ २३ सोमबार, नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष मो. सफिक बेहना र प्रहरी निरीक्षक हरि बस्नेतलाई सम्मान गरिएको छ। अध्यक्ष सहित प्रहरी निरीक्षकलाई नेपाल मोहर्रम तथा कर्बला संरक्षण समिति, बाँकेले उनिहरले गरेको कार्यको उच्च मुल्यांकन गर्दै सम्मान गरेको हो। ... बाँकी अंश»
जाँड खाएर वडाध्यक्षले अर्को गाँउका वडाध्यक्ष कुटेको आरोप, प्रहरीले समात्यो
२०७६ भदौ २३ सोमबार, आफूलाई पटक–पटक धम्की आएको र पछिल्लो पटक ०७६ असार ३० गते आफूमाथि कार्यालयमै आक्रमण भएपछि बाध्य भएर सहकर्मीविरुद्ध उजुरी गरेको पीडित थापाले बताए । ... बाँकी अंश»
जन प्रतिनिधिहरुको विदेश भ्रमणमा लर्को
२०७६ भदौ २३ सोमबार, काठमाडौं। संघीय सरकारले जनप्रतिनिधिहरूलाई विदेश भमणमा कडाइ गरे पनि जन प्रतिनिधिहरूको विदेश भमणको मोह रोकिएको छैन। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाका मेयर-उपमेयरले एक वर्षमा दोहर्‍याएर विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन्। ... बाँकी अंश»
धारिलो हतियार प्रहार गरी शर्माको हत्या
२०७६ भदौ २३ सोमबार, धनुषा । धनुषामा आइतबार साँझ धारिलो हतियार प्रहार गरी एक वृद्धको हत्या गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिका–९ कटरैत बस्ने ६५ वर्षीय रामवरण शर्माको हत्या गरिएको हो । ... बाँकी अंश»
ललितपुर कांग्रेसको प्रदेश क्षेत्रिय कार्यसमितिको को को बने सभापति ?
२०७६ भदौ २३ सोमबार, ललितपुर । नेपाली कांग्रेस ललितपुरले ललितपुरका तीन वटै सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र छ वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा सभापतिहरुको टुङ्गो लगाएको छ । ... बाँकी अंश»
बाढीले ४० परिवारको चार बिघा खेती लगाइएको जग्गा कटान गरी बगायो
२०७६ भदौ २२ आइतबार, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका– ४ सिकलपट्टि जाइका किसानको जग्गा दोदा नदीमा आएको बाढीले कटान गरी बगाउन थालेको छ । ... बाँकी अंश»
एम्नेस्टीले मानवअधिकार अभियानलाई सशक्त बनाउने
२०७६ भदौ २२ आइतबार, जनकपुरधाम । एमनेस्टी इन्टरन नेशनल नेपालद्वारा शनिबार जनकपुरधाममा एक दिने अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ... बाँकी अंश»
आधा दर्जन नेता अरु पार्टी त्यागेर कांग्रेसमा
२०७६ भदौ २२ आइतबार, गुल्मी । नेपाली कांग्रेस इश्मा गाँउपालिका १ हस्तिचौरद्धारा बृहत खुल्ला तिजगित तथा नृत्य प्रतियोगिता हर्पुकोटमा सम्पन्न भएको छ । ... बाँकी अंश»
विकासका लागि मिल्न मन्त्री अर्यालको आग्रह
२०७६ भदौ २२ आइतबार, स्याङजा । भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले विकासका लागि सबै दल मिल्नुको विकल्प नरहेको बताएकी छन् । ... बाँकी अंश»
राजधानीमा साना हतियारको बिगबिगी, दुई पेस्तोलसहित सात पक्राउ
२०७६ भदौ २१ शनिबार, काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ माछापोखरीबाट दुई वटा पेस्तोलसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको छ । ... बाँकी अंश»
किरनाले टोकेर शिक्षकको मृत्यु
२०७६ भदौ २१ शनिबार, पाँचथर । किरना भन्ने किराले टोकर पाँचथरको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर ४ का एक ब्यक्तिको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानिय विनोद कुगेनाम्बा रहेका छन् । ... बाँकी अंश»
विकासमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण
२०७६ भदौ २१ शनिबार, सर्लाही । सर्लाही क्षेत्र नम्वर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री महेन्द्र राय यादवले जनप्रतिनिधिलाई विकास निर्माणमा अझ जिम्मेवार बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
वर्षाले पहिरो जाँदा कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध
२०७६ भदौ २१ शनिबार, मान्म । शुक्रबार रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारणले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको तिलागुफा नगरपालिका–७ टाकुल्ला खोलामा पहिरो गएको छ । अविरल वर्षापछिको पहिरोका कारणले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । ... बाँकी अंश»
जलजलामा व्यक्तिको जलजला, १५ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा भोगचलन
२०७६ भदौ २१ शनिबार, पर्वत । उत्तरी पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा मात्रै १५ हजार रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जमीन व्यक्तिले भोगचलन गरेको पाइएको छ । ... बाँकी अंश»
बाँसको खट भाँचिएर खस्दा एकको मृत्यु, एक घाइते
२०७६ भदौ २१ शनिबार, भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिका–७ ग्वाछे टोलमा गणेश सुवालको चारतल्ले पक्की घरको तेस्रो तल्ला बाहिर प्लाष्टर गर्ने क्रममा बाँसको खटबाट खस्दा शुक्रबार एक जनाको मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
सात वर्षे बालकलाई आक्रमण गरी मार्यो चितुवाले, २४ जनाको ज्यान लिइसक्यो नरभक्षीले
२०७६ भदौ २१ शनिबार, बैतडी । चितुवाको आक्रमणबाट बैतडीको तल्लोस्वराडमा एक बालकको ज्यान गएको छ । शिवनाथ गाउँपालिका–२ टाणीखर्कका रामसिंह मडैका ७ वर्षीय छोरा सुदीपको चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गएको हो । ... बाँकी अंश»
वडाध्यक्षले बेचे झोलुङ्गे पुल
२०७६ भदौ २० शुक्रबार, विसं २०२१ मा निर्माण भएको सो पुललाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संरक्षण गर्नुको साटो उल्टै बेच्दा पनि वडाका आम नागरिकलाई केही थाहा नदिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । पुराना सम्पदा बेच्दा सार्वजनिकरुपमा निर्णय नगराई बेची दिँदा देवीघाटका स्थानीयवासी दुखित बनेका छन् । ... बाँकी अंश»
सीतारामद्धारा खुकुरीले टाउकोमा हानेर श्रीमतीको हत्या
२०७६ भदौ २० शुक्रबार, खोटाङ । श्रीमान्ले प्रहार गरेको खुकुरीबाट खोटाङमा श्रीमतीको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माका सीताराम राईले ३० वर्षीया श्रीमती देविका राईलाई बिहीबार राति टाउकोमा खुकुरी प्रहार गर्दा उनको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो । ... बाँकी अंश»